Nagarik Shukrabar - प्लस टु पुस्तालाइ प्राध्यापककाे सुझाव : के पढ्ने अभिभावकलाई हैन, आफैँलाई सोधाैं !
आइतबार, १७ असार २०७५, ०६ : ५५ | शुक्रवार
एलपी भानु शर्मा, प्राध्यापक, पोखरा विश्वविद्यालय
भर्खरै कक्षा १० (एसईईको) परीक्षाफल आएको छ । परीक्षाफलमा जो उत्तीर्ण भए उनीहरुले अगाडिको यात्रा कसरी गर्ने ? अध्ययनको विषय कसरी छान्ने ? आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी चिन्ने ? अहिलेको महत्वपूर्ण पाटो यही हो ।
जुम्ल्याहाँ नै भए पनि उनीहरुको रुचि, आदत, स्वभाव, भिन्न हुन्छ । एउटै घटनालाई बुझ्ने तरिका व्यक्तिपिच्छे अलग हुन्छ । त्यसकारण हरेक कर्म गर्दा हामीले आफ्नो स्वभाव, विचार, तथा रुचिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ ।
विषय छनोट गर्ने जम्मा तीन तरिका छन् ।
आफ्नो स्वभावलाई अरूको प्रभावमा परेर आफूले आफूमाथि अन्याय गरिरहेका हुन्छाैं । अहिलेका किशोर–किशोरीलाई आफूअनुसारको व्यवहार लाद्न खोज्छाैं । यो गलत हो ।
विषय जम्मा तीनवटा हुन्छन् । सत्यम सुन्दरम र अर्काे सुन्दरम् । अध्ययनको सिलसिलामा यदि आफूलाई सत्य खोज्न मन पर्छ भने विज्ञान, न्याय निसाफ गर्न मनपर्छ भने कानुन, नयाँ कुरा थाहा पाउन मनपर्छ भने दर्शनशास्त्र पढ्नुपर्छ ।
हामी किशोर–किशोरीलाई अनावश्यक तनाव दिने गर्छाैँ । डाक्टर बन्नैपर्छ, इन्जिनियर बन्नैपर्छ भनेर दबाब दिन्छौं । भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर विषय चयन गर्नुभन्दा क्षमताअनुसारको विषय रोज्नु बुद्धिमानी हो । दबाबमा चयन गरेको विषयमा सन्तुष्टी हुन्न । सन्तुष्टी नभएपछि मन विचलन हुन्छ । कामचलाउ गर्ने बानीको विकास हुन्छ । जसले आफैँलाई ठग्न थाल्छ उसको स्वभावै त्यही बन्छ र बाँकी यात्रा पनि कामचलाउ गर्दै बित्छ ।
के पढ्दा आफू आफैं जस्तो हुन सकिन्छ ? कुन विषयमा उच्च शिक्षा लियो भने आफ्नो अभिव्यक्तिसँग मिल्दो जुल्दो हुन्छ त्यो सोध्नुपर्छ ।
केही बेर चिन्तन गर्ने । यो समाजका समस्याहरु के–के छन् विचार गर्ने । ती समस्यामध्ये कुन समस्या सामाधान गर्दा आफूलाई मज्जा आउँछ आनन्द आउँछ त्यही विषय छानाैं। जुन समस्याको सामाधान गर्न आफू जन्मेको हुँकी जस्तो लाग्छ त्यही छान्ने गर्नुपर्छ, यस्तो भएपछि पढ्न बढो मज्जा आउँछ । हरेक दिन आनन्दका लागि अध्ययन गरिन्छ र सफल पनि भइन्छ । त्यहीअनुसारको मित्रता गाँसिँदै जान्छन् । ज्ञान र अनुभवको दायरा फराकिलो हुँदै जान्छ ।
आफ्ना छोराछोरीलाई चिनाैं
यस विषयलाई संवेदशील आँखाले हेरौँ । सजिलो हैन सहज खोजाँै । आजको युगको अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई चिनेको छैन भने कसरी अभिभावक भयो ? जन्माएर मात्र हुँदैन बच्चाको खुबी इच्छा पनि चिन्न सक्नु पर्छ । एउटा गलत भावले सयौं गल्ती हुन सक्छन् त्यसैले यस्तो गल्ती नगरौँ । एकअर्कालाई चिन्ने बुझ्ने गरौं ।